Aung's Investment: Mid-week alert - Microsoft
Mid-week alert - Microsoft
ဒီBlogကို မှန်မှန်အားပေးနေတဲ့သူတွေအားလုံးကို Technical Analysis and Fundamental Analysisနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ basicတော့ နည်းနည်းရပြီလို့ Assumeလုပ်ပြီး ဒီ Mid-week alertကို ရေးပါတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ Practicalအနေနဲ့ လုပ်စေချင်လို့ပါ။
Tech Stockတွေကို ပေါင်းစပ်ပြီးလုပ်ထားတဲ့ Major Indexကတော့ NASDAQ Composite (^IXIC) Indexပါ။ NASDAQ Compositeဟာ Sell-offအလုပ်ခံနေရတာ အောက်တိုဘာ ၂၀ကတည်းက။ အဓိကကတော့ ဘာမှ Fundamentallyဆိုးဆိုးရွားရွားပြဿနာမရှိပဲ၊ Profit-takingအလုပ်ခံနေရတယ်။ Indexက March 2009ကတည်းက အရှိန်ကောင်းကောင်းနဲ့တက်လာတာ ဒီလောက်Correctionဖြစ်တာ Acceptable Rangeလို့ ကျွန်တော်တော့ ယူဆတယ်။
ကျွန်တော့်Radarထဲကို အခုရက်ပိုင်းအတွင်းဝင်လာတာက Microsoft (MSFT)။ MSFTဟာ First Quarter Earningကို အောက်တိုဘာ ၂၃က Reportလုပ်ပြီးပါပြီ။ မနှစ်က First Quarterနဲ့ယှဉ်ရင် Revenueရော၊ Earningsရော ကျတယ် - ဒါပေမယ့် Marketက expectလုပ်ထားတာထက်သာတယ်။ ဒီလို ခေတ်ပျက်ထဲမှာ ထင်ထားသလောက် မကျတာဟာ Impressive resultလို့ ဆိုနိုင်တယ်။ MSFTဟာ နောက်နှစ်ထဲမှာ net operating EXPENSEဟာ ပိုကျသွားလိမ့်မယ်လို့ guidanceတောင် ပေးလိုက်သေးတယ်။ စာသေချာမဖတ်တဲ့သူတွေက အဲဒီ့နေ့က Expenseကို မမြင်ပဲ ချရောင်းကုန်လို့ ဈေးတောင်နည်းနည်း ကပျက်ကယက် ဖြစ်သွားသေးတယ်။
အရေးအကြီးဆုံးက Windows7release။ Microsoftဟာ PCလောကကို လွှမ်းမိုးထားဦးမယ်လို့ Analystအားလုံးလိုလိုက ယုံကြည်ကြတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ယုံတယ်။ New Releaseနဲ့ Less operating expenseဟာ MSFTရဲ့ earningကို boostလုပ်ဖို့ပဲရှိတယ်လို့ ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ Business အများစုဟာ Vistaရဲ့ Unpopularityကြောင့် XPနဲ့ပဲ နှစ်ပါးသွားနေတဲ့ Businessတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ သူတို့ဟာ Windows7အောင်မြင်ရင် အောင်မြင်သလို Vistaကို ကျော်ပြီး Upgradeလုပ်ဖို့ Chanceတော်တော်များပါတယ်။
Ok - Fundamentalပြီးတော့ Technicalပိုင်းကကြည့်ရအောင်။ Tech Stockတွေကို Analyseလုပ်တဲ့အခါ Sector Indexကိုပါတွဲပြီးလေ့လာတာ ပိုစိတ်ချရတယ်။ ဒါကြောင့် NASDAQ Compositeကိုပါ ဆွဲထည့်ရမယ်။
NASDAQ Compositeဟာ Long term up trendကနေ ဖောက်ပြီး Selloffအလုပ်ခံနေရတာ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်လုံးပဲ။ မနေ့က သူ့ရဲ့ Closeဟာ short term down trendအပေါ်မှာ ပိတ်ပါတယ်။ Indexရဲ့ Major Componentဖြစ်တဲ့ Intel (INTC)ဟာ Analyst Downgradeအလုပ်ခံရတာတောင် Indexရဲ့Closeဟာ breakout signalပြနေပါတယ်။ ဒါဟာ Tech Stockတွေအတွက် Reversal ဖြစ်နိုင်တဲ့ Signပါ။
MSFTကတော့ short term down trendကို မကျော်နိုင်သေးဘူး။ ဒါပေမယ့် MSFTဟာ 27.50နဲ့ 25.75မှာ Strong Supportတွေရှိပါတယ်။ ဒီတော့ Technically, MSFTဟာ ဒီနေ့ ပြန်ပြီး Bounceနိုင်ပြီး Down trendကို breakoutလုပ်မယ်လို့ ခန့်မှန်းပါတယ်။
ဒီတော့ NASDAQ Compositeရော၊ MSFTရော ဒီနေ့တက်ခဲ့ရင် Long term investmentအနေနဲ့ Definitelyဝယ်သင့်တယ်လို့ Suggestလုပ်ပါတယ်။ Disclaimerကို ထပ်ပြောရရင် Every investmentမှာ Riskရှိတာမို့ Lossဖြစ်ခဲ့ရင် Investorရဲ့ တာဝန်သာဖြစ်ပါကြောင်း။
PS : Stop-lossအနေနဲ့ ၂၅.၇၅အောက်ရောက်ခဲ့ရင် အရှုံးခံပြီး ရောင်းလိုက်ပါ။
Posted by Aung Myo Htet at 11/04/2009 01:18:00 PM
Labels: alert, disclaimer, suggestion
Aung Myo Htet November 05, 2009 6:38 AM
AEST 6:35am, US EST 2:35pm, MSFT up 75cents. getting buy signal. Volume is also not bad.
Aung Myo Htet November 05, 2009 8:59 AM
NASDAQ composite is flat. MSFT price as of AEST 8:58am is 79cents up at $28.32. Volume is higher than usual which supports the price.
NGUUNN November 06, 2009 12:20 PM
Thank you! Bro!. Breakout signal တွေကို သေချာလေ့လာသွားတယ်။ မှန်းထားတဲ့အတိုင်းပဲ NASDAQ က strongly breakout ဖြစ်သွားတယ်။
YNWT November 20, 2009 8:10 PM
ကြုံလို့ ရှိရင် ကိုအောင်မျိုးထက်ကြီးရဲ့ ရေဒါ ဖမ်းပုံဖမ်းနည်းလေးကိုလည်း ရေးပါဦး....
The Last 'M'